सचिन परियार बिवाद बारे इन्द्रेणीका कृष्ण कंडेलले के भन्छन् ! हेर्नुहोस (भिडियो सहित) – SUDUR MEDIA
April 20, 2021 April 20, 2021 AdminLeaveaComment on सचिन परियार बिवाद बारे इन्द्रेणीका कृष्ण कंडेलले के भन्छन् ! हेर्नुहोस (भिडियो सहित)
धेरै पछि सचिन परियारलाइ हुर्काएर स्याहार सुसार गरेकी र जन्मदिने आमाकी साथी चर्चित गायिका निशा श्रीसले आज मिडियामा आएर सत्य तथ्य खोलेकी छिन | चर्चित बाल गायक सचिन परियारको उनकी आमालाई भेट्ने धो’का पुरा भएको छ । हिँजो बाग्लुङबाट काठमाण्डौ गएकी उनले हिँजो नै सचिनलाई भेटन खोजेकी थिईन् ।
मिडियाकर्मीहरुको सहयोगमा उनलाई काठमाण्डौ पुर्याईएको छ । आफ्नै जन्मदिएको छोराको माया किन नहुँदोहो । कति वर्ष देखि पी’डा लुकाएर बसेकी उनकी आमाले सचिनलाई पहिलो पल्ट भेट्दा मन था’म्न सकिनन् डाँ”को छो’रेर रो’ईन् । एकछिन त्यहाँ रहेका सम्पूणर् मानिसहरु चु’पचा’प रहे । कतिका आँ’खा र’सा’ए । कतिले मन था”म्न सकेनन् ।
यता सचिन परियार पनि आमालाई भेट्दा मन स”म्हा’ल्न सकेनन् । उनले विभिन्न भिडियोमा आमालाई भेट्ने मन रहेको बताएका थिए । उनले आमा छोराको लामो समयपछि भेट भएको र त्यो दृ”ष्य देख्दा कतिपयले तेजेन्द्रले ग’ल’त काम गरेको समेत बताए ।ता आँ’सु नै था”म्न नसकेपछि सचिनले भने आमालाई एउटा गीत गाएर फ’का’एका छन् ।
मेरी आमालाई भेटेपछि आ’ईल’भयू भन्न मन लाग्छ भन्ने गीत गाएर फ’का’एका थिए । त्यस्तै उनले आफुसगं भएको पैसा आमालाई दिएर फ’का’एका छन् । सचिनको बुबा तेजेन्द्रको बारेमा चौतर्फी बिबाद भएपछि इन्द्रेणीका कृष्ण कंडेलले पनि आफ्नो प्रतिक्रिया दिएका छन । भिडियो यहाँबाट हेर्नुहोस्ः
छबी-शिल्पाको बिषयमा राजेन्द्र खड्गीको ख’रो टिप्पणी, किशोर खतिवडालाई अन्तर्वार्ताबाटै थ’र्काए ! हे’र्नुहोस (भिडियो सहित)
भोलीको रा’शिफल हे’र्नुहोस : मिति २०७७ साल चैत्र १८ गते बुधबार तदनानुसार ईश्वी सन् २०२१ मार्च ३१ तारिख